China Gasi Solenoid Vhuru, Magnet Vagadziri Vagadziri, Thermocouple yeGasi Oven Suppliers - Aokai
Nyanzvi inogadzira gasi chengetedzo inopera kudzivirira mudziyo, kutengesa kwepagore 20 miriyoni seti.
ISO9001ã € CSA, KUZIVISWA KWEZVINONYANYA, ROSH, Chitupa chakakodzera chekupa mutengesi
flame kutadza kudzivirira zvishandiso, electromagnetic mavharuvhu uye thermocouples anoshandiswa mune akasiyana gasi midziyo
North America, West Europe, Southeast Asia nedzimwe nyika nematunhu, pamwe nevatengi vepamba vane mukurumbira.
Ningbo Aokai Security Technology co., LTD., Yakavambwa muna 2005, inyanzvi inogadzira gasi chengetedzo yakatsakatika dziviriro mudziyo, wegore kutengesa mamirioni makumi seti. Kambani yedu inyanzvi yekugadzira gasi solenoid vharafu, thermocouple yekubika, magineti vharuvhu, thermocouple yekubika, thermocouple yegasi hovhoni, solenoid vharuvhu BBQ, murazvo kutadza kudzivirira zvishandiso, magetsi emagetsi mavharuvhu uye thermocouples anoshandiswa mune dzakasiyana gasi midziyo, inosanganisa R&D, kugadzirwa uye tengesa pamwe chete.
Zvekubvunza nezve gasi solenoid vharafu, magineti vharafu, thermocouple yegasi oveni kana mutengo runyorwa, ndapota siya email yako kwatiri uye isu tichabatana mukati memaawa makumi maviri nemana.
Chinyorwa: Brass yekumira ngura, ductility pakakwirira tembiricha, uye yakaderera magineti kukwana
Shandisa: Kurumidza uye nyore kubatanidza, yakagadzirirwa kushandiswa nehose clamp.
Gesi Solenoid Magnetic Valve yeFlameout Kuchengetedza Mudziyo
Chigadzirwa chacho chinonyanya kugadzirwa nemhangura yemhangura nemhangura yemhangura, iyo inovandudza simba uye kushandiswa kwevhavha.Welcome kutenga Gas Safety Valve Assembly Big Solenoid Valve kubva kwatiri. Chese chikumbiro chevatengi chiri kupindurwa mukati meawa makumi maviri nemana.
Gesi Choto Tembiricha Sensor Thermocouple
Kana thermocouple yako ichidziya pamoto.Kana iyo thermocouple yekupedzisira yakanyatsobatanidzwa nevharuvhu.Kana materminals akabatanidza tilt switch zvakanaka. Unogona kuzorora uchitenga tembiricha yemoto yegesi sensor thermocouple kubva kufekitari yedu uye isu tichakupa yakanakisa mushure mekutengesa sevhisi uye kuendesa panguva.
Iyo junction (musoro) yeiyo thermocouple inoiswa mune yepamusoro-tembiricha murazvo, uye iyo inogadzirwa yemagetsi simba inowedzerwa kune coil yechengetedzo solenoid vharafu yakaiswa pavhavha yegesi kuburikidza newaya mbiri. Simba rekutsveta rinogadzirwa nevhavha ye solenoid inobata ruoko mune iyo vharuvhu ye solenoid, kuitira kuti gasi riyerere kuenda kumuromo kuburikidza nevharuvhu yegasi.
Mumamiriro ekushanda, kushanda kwekushanda uye kushanda ambient tembiricha yegesi solenoid valve inogona kuchinja, saka zvakakosha kuendesa kuchengetwa uye kuchengetedza gasi solenoid valve zvigadzirwa. Nenguva tsvaga shanduko yenzvimbo yekushanda yegasi solenoid valve kudzivirira tsaona.